माधव नेपालको नजरमा प्रचण्ड धेरै सोझो, जालझेल नबुझ्ने दावी ! -
माधव नेपालको नजरमा प्रचण्ड धेरै सोझो, जालझेल नबुझ्ने दावी !
प्रकाशित मिति : २०७७, १२ माघ सोमबार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल खेमाका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोझो भएको बताएका छन्।
सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित दुई नम्बर प्रदेशका अगुवाहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा नेपालले प्रचण्ड सोझो भएको भन्दै जालझेल नबुझ्ने बताए। दाहालले ओलीको जालसाजी नबुझेकै कारण त्यसको भुक्त्तभोगी आफूहरु हुन पुगेको उनको भनाई छ। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले प्रचण्ड जसलाई पनि सहजै विश्वाश गर्ने बताए।
“प्रचण्ड कमरेडले विश्वास गर्नुभएछ, सही गर्नुभएनछ । दुई अध्यक्षको सही हुनुपर्नेमा एउटा अध्यक्षको मात्रै सही भयो भनेर । निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाएछ । हुन सक्छ उहाँलाई फकाउन मैले मात्रै सही गरेर पठाइदिए हुन्छ भने होलान् । प्रचण्डले हुन्छ–हुन्छ भन्दिनुभयो होला । हाम्रो प्रचण्ड कमरेड अलि सोझो पनि हुनुहुन्छ । जालझेल बुझ्नुहुन्न । हामी त भुक्तभोगी पूर्वएमालेका मान्छेहरु । मैले त एउटै घटनाबाट थाहा पाउँछु ।”,उनले भने।
यस्तै नेता नेपालले वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर भ्रममा पर्न नसकिने पनि बताएका छन्। ओलीले संसद विघटन निर्वाचन गराउनको लागि नभई सत्तामा टिकिरहनको लागि गरेको उनले आरोप लगाए। नेपालले भने,”केपी ओलीको चुनाव गराउने चाहना छैन । तीन महिनामा चुनाव गरेर उहाँ बालकोट जानुहुन्छ ? यो पाँच वर्ष बस्छु, अर्को पाँच वर्ष पनि बस्न संकटकाल लगाएर भए पनि, तानाशाही लादेर भए पनि सत्तामा टाँसिएर बस्छु भन्ने उहाँको चाहना हो।”
प्रदेश-२ का राज्यमन्त्री यादवमाथि कुर्सी प्रहार !
मधेश विरोधी भनेर तराई पस्न नदिनेले नै मेरो स्वागतमा गेट वनाउँछन्ः प्रम ओली
‘प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने टुंगो एक/दुई दिनमै लाग्छ’ – प्रचण्ड
ओलीको पक्षमा बहुमत सांसद, बाँकी दुई वर्ष पनि ओलीकै नेतृत्व
भूमाफिया भन्दै मञ्चबाट लखेटिए अर्थमन्त्री, स्थानीयले बर्षाए मञ्चमै ढुंगामुढा